fahasalamana - ALinks
Lahatsoratra momba ny fahasalamana
Ahoana no fiasan'ny fitsaboana any UK?
Enga anie 19, 2022 Demi fahasalamana, UK
Tsy olom-pirenen'i Angletera hanome fitsaboana vonjy maika any amin'ny hopitaly NHS UK. Ny National Health Service dia iray amin'ireo rafitra fitsaboana tsara indrindra eran-tany. Saingy, miankina amin'ny firenena misy anao, mety ho tompon'andraikitra amin'ny sarany sasany ianao. Ny Royaume-Uni dia manana
Lisitry ny hopitaly any Aostralia
Janoary 17, 2022 Shubham Sharma Aostralia, fahasalamana
Ny rafitra fitsaboana izay any Aostralia fantatra fa iray amin'ireo tsara indrindra eto an-tany. Ireo olompirenena ao Aostralia dia manana tolotra ara-pahasalamana fototra maimaimpoana. Ny serivisy fikarakarana ara-pahasalamana hafa dia lafo koa ary azo antoka ihany koa. The
Lisitry ny hopitaly any Etazonia
Janoary 17, 2022 Demi fahasalamana, USA
Ny rafitra fitsaboana amerikana sy ny hopitaly tsara indrindra hita fa iray amin'ireo tsara indrindra sy lehibe indrindra eto an-tany. Araka ny tatitra iray dia manana laharana faha-37 eran'izao tontolo izao ny rafitra fitsaboana any Etazonia. Ny Etazonia tsy manaraka a
Lisitry ny hopitaly any Torkia
Janoary 17, 2022 Shubham Sharma fahasalamana, vorontsiloza
Fantatry ny rehetra fa tena zava-dehibe ny fikarakarana ara-pahasalamana. Lasa zava-dehibe kokoa ny fikarakarana ny tenanao rehefa mifindra monina amin'ny firenena iray mankany amin'ny firenena hafa ianao noho ny fiovan'ny toetrandro sy ny jeografika. Ankehitriny, tonga amin'ny gidro
Hopitaly any Holandy
Janoary 10, 2022 Shubham Sharma fahasalamana, Pays-Bas
Ny Netherlands dia manana serivisy fikarakarana ara-pahasalamana tena tsara ho an'ny olom-pirenena. Sady fahasalamana ara-pahasalamana sy tsy miankina no misy eto amin'ny firenena. Ny fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny besinimaro eto amin'ny firenena dia azo alaina malalaka na amin'ny vidiny ambany indrindra ho an'ny olom-pirenena. Public
Fitsaboana ara-pahasalamana any Norvezy
Janoary 8, 2022 Demi fahasalamana, Norvezy
Ny rafi-pitsaboana Norveziana dia miorina amin'ny fitsipiky ny fidirana manerantany, ny fitsinjaram-pahefana ary ny safidy malalaka amin'ny mpamatsy. Isaky ny loha, ny fandaniana Norveziana amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana no ambony indrindra eran-tany. Ny mpikambana tsirairay ao amin'ny fiantohana nasionaly Norveziana
Ahoana ny fiasan'ny fitsaboana any Switzerland? Hopitaly Soisa tsara indrindra
Janoary 8, 2022 Shubham Sharma fahasalamana, Soisa
Suisse dia iray amin'ireo rafitra fitsaboana tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Suisse dia manodidina ny 280 ny hopitaly manome serivisy ho an'ny olom-pireneny. Ny hopitaly any Soisa dia manana marary manodidina ny 40,000 isan-taona. Tsy manana governemanta tantanan'ny Switzerland na
Hopitaly any Canada
Janoary 8, 2022 Demi Kanada, fahasalamana
Manana hôpitaly tsara i Kanada, indrindra fa any Montréal sy Toronto. Ankoatr'izay, ny hôpitalianina any Kanada dia afaka miara-miasa amin'ny fampiharana ara-pahasalamana amin'ny fangatahana famandrihana daty. Mampalahelo fa saika ny tranga rehetra dia mila isa fampahafantarana kanadianina ny fampiharana. Ny hopitaly tsara indrindra any Kanada dia: General General
Manao ahoana ny hopitaly any Rosia, torolàlana haingana amin'ny hopitaly Rosiana
Janoary 8, 2022 Demi fahasalamana, Rosia
Voalohany indrindra, any Rosia, afaka miantso ny 103 ianao raha te hanana rohy mivantana amin'ny fiara mpamonjy voina vonjy taitra. Ny mpandraharaha rehetra dia miteny Rosiana ary tokony ho mahay miteny anglisy ihany koa, makà mpandahateny Rosiana manodidina anao raha sahirana ianao
Lisitry ny hopitaly tsara any Frantsa
Janoary 6, 2022 Shubham Sharma Frantsa, fahasalamana
Misy fitenenana malaza tokoa "Ny hopitaly no nandre ny vavaka betsaka indrindra". Ny hopitaly dia andrim-pitsaboana fitsaboana ny marary amin'ny aretina maro. Ny tobim-pahasalamana frantsay sy tobim-pitsaboana dia iray amin'ireo tsara indrindra eran'izao tontolo izao.